सतप्रतिशत ‘भ्यालुएड’ हुने पाँच क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरौ, जसले व्यापार घाटा कम र रोजगारी बढाउँछः उद्याेगी सतीशकुमार माेरकाे अन्तर्वार्ता
- सुजन ओली
२७ माघ २०७५, आईतवार १५:२५
नेपालका युवाहरु विदेश जाने र त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पठाउन मात्रै सफल देखिएका छन् । उनीहरु नेपालमा केही गरौ भन्ने सोच भन्दा पनि विदेश गएर काम गर्न तयार देखिन्छन् । यो देशको बिडम्बना हो । नेपालमा उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले पनि चाहेको देखिँदैन् । उद्यमशीलता त्यसै विकास हुँदैन्, त्यसका सरकारको भूमिका ठूलो हुन्छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीशकुमार मोर प्रतिष्ठित उद्योगी हुन् । आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा आवद्ध मोर लक्की ग्रुपका अध्यक्ष समेत छन् । उनी उद्योगीहरुको संस्था परिसङ्घमा रहेर उद्योग मैत्री कानुन बनाउन निरन्तर लागिरहेका छन् । त्यसैगरी, फागुन २ गते हुन लागेको उद्यमशीलता समिटको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका मोरसँग देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटा, लगानी मैत्री नीति नियम र नयाँ उद्यमी जन्मन नसक्नुका कारणबारे क्यापिटल नेपालका सुजन ओलीले गरेको कुराकानी ः
सरकार तथा परिसङ्घको संयुक्त आयोजामा फागुन २ गतेबाट नेपाल उद्यमशीलता समिट हुँदै छ । यसको उद्देश्य के हो ?
लामो समयदेखि नेपालमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । नयाँ उद्यमीको उदय नहुने हो भने देश आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुँदै सक्दैन, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन । यही भएर सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर उद्यमशीलता समिट आयोजना गर्न लागेको हो ।
त्यसैगरी, देशमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय गरेर तीन तहको सरकार बनेको छ । तीन तहका सरकारले आर्थिक विकास गर्न चाहेका छन्, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएका छन्, देश समृद्ध बनाउन चाहेका छन्, । त्यसलाई थप सहजीकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर समिट गर्न लागिएको हो ।
निजी क्षेत्रले सात ओटै प्रदेशका उद्योग मन्त्रीलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्न लागेको छ । सम्मेलनमा उद्योग मन्त्रीले आफ्नो प्रदेशका कृषिमा, पर्यटनमा, उद्योगका संभावना उजागर गर्ने छन । उनीहरुले पाँचदेखि सात मिनेटमा सम्भावना, चुनौति, अबसर, सरकारले दिने सहयोगको बारेमा चर्चा गर्ने छन् । उनीहरुले दिन लागेको सुविधाबारे सम्मेलनमा जानकारी गराएपछि नयाँ उद्यमीलाई मात्रै होइन, पुराना उद्योगलाई पनि त्यो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने बाटो खुला हुन्छ । यसले प्रदेशमा भएको सम्भावनाको उजागर गर्न मद्दत पुग्छ ।
सम्मेलनमा कुनकुन क्षेत्रबाट कति सहभागी हुँदै छन् ? मुख्य एजेन्डा के हो ?
सात ओटै प्रदेशका १० देखि १५ जना उद्यमी, म्यानेजमेन्ट कलेजका विद्यार्थी पनि कार्यक्रममा सहभागि हुँदै छन् । सबै प्रदेशका , मन्त्री तथा कर्मचारीको पनि सहभागिता हुन्छ । त्यसैगरी, उद्यमशीलता गर्न चाहाने व्यक्ति पनि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन ।
सम्मेलनमा उनीहरुले सरकारको नियम कानुन कस्तो छ, देशभित्र आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रहरु के के हुन् । सरकारले उद्योगीलाई कस्ता कस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी कानुनमा के–के सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सम्मेलनमा उठछ ।
विगत लामो समयदेखि नेपालमा नयाँ उद्यमीको जन्म हुन सकेको छैन । नयाँ उद्यमी जन्माउन यो सम्मेलनले कतिको सहयोग पु¥याउँछ ?
नेपालमा अवसर नभएर यवाहरु विदेश गएका होइनन्, यहाँ धेरै सम्भावना छन् । उदाहरणका लागि कुनै प्रदेशमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना हुन्छ, कुनै प्रदेशमा कृषिको सम्भावना अधिक हुन्छ भने कुनै प्रदेशमा उद्योगको सम्भावना छ । कुनै प्रदेशमा जलविद्युत्मा सम्भावना हुन्छ । युवाहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा बाटो देखाउनुपर्ने हो, यो सम्मेलनले बाटो देखाउने काम गर्छ ।
नयाँ उद्यमी नजन्मिनुको प्रमुख कारण मध्ये एउटा हो ‘लगानी जुटाउन नसक्नु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सुरुमै नपत्याउनु’ । त्यस बाहेक केही नीतिगत समस्याले गर्दा पनि उनीहरु उद्यमशीलतामा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ ?
तपाईले भनेको कुरा सही हो । युवाहरुलाई सुरुमै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास गर्दैनन्, । उनीहरुले बनाएको कतिपय परियोजना वित्तीय अभावकै कारण असफल भएका पनि छन् । आफ्नो उद्यमशीलता बन्ने हुटहुटी पूरा नभएपछि उनीहरु विदेशिन बाध्य भएका पनि छन् ।
त्यही भएर सरकारले युवाका लागि विशेष ‘स्किम’ ल्याउनुपर्छ । राम्रा परियोजना बनाएर ल्याउने युवालाई सरकारले कुनै माध्यमबाट फाइनान्स गर्नुपर्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा युवाहरुले आवश्यक पैसा पाउन सक्छन् ।
अर्को कुरा नेपालमा क्रेडिट क्रञ्चको समस्या अधिक हुन थालेको छ । बैङ्कमा पैसा नभएर पनि यस्तो समस्या आउने गरेको छ । सरकारले पूर्वाधारमा खर्च बढाउन नसकेकै कारण खर्च नबढेको र त्यही भएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएको हो । भएभरको पैसा सरकारको ढुकुटीमा गएर थन्किएकाले पनि बजारमा तरलता अभाव भएको हो ।
नेपालमा नयाँ उद्योगीको जन्म नहुनु, नयाँ उद्योग नलाग्नु र धेरैजसो व्यक्तिहरु उद्योग भन्दा पनि व्यापारमा केन्द्रीत भएकै कारण नेपालको व्यापार घाटा आकाशिँदै गएको छ । यसको समाधान के हो ?
रातारात व्यापार घाटा कम हुँदैन । यदि कसैले रातारात व्यापार घाटा कम गर्छु भन्यो भने त्यो दिवा सपना भन्दा केही हुन सक्दैन । आयातकर्ता देशको रुपमा परिचित छ नेपाल । यहाँ उत्पादन लागत एकदमै बढी छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले सहुलियत नदिँई उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । जब उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्दैनन्, तबसम्म आयात रोकिन्न । आयात नरोकिँदासम्म कसरी व्यापार घाटा कम हुन्छ ?
हामीसँग सम्भावना भएका क्षेत्र, हाम्रो कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर बन्ने सामान जे जे छन् त्यसमा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । त्यसो हुन सकेमा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न मात्रै सकियो भने पनि व्यापार घाटा कम हुन्छ । हाम्रो देशमा भएका स्रोतहरु प्रयोग गरेर उत्पादन हुने वस्तुमा सरकारले सहयोग गर्ने र ती वस्तुको आयातमा रोक्न सकेमा व्यापार धाटा कम हुन्छ ।
बैङ्कले चर्को ब्याज लिएका कारण उद्योगधन्दा चलाउनै नसकिने अवस्था आयो भनेर उद्योगीहरु सडकमै ओर्लिएको छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योगी जन्मिने सम्भावना कतिको हुन्छ ?
यो एकदमै ठूलो समस्याको विषय बनेको छ । आयोजना सुरु गर्दा एउटा ब्याजदरमा ऋण लिएको हुन्छ । परियोजना नसकिँदै बैङ्कले ब्याजदर बढाइसकेका हुन्छ । यसले उद्योगीलाई हतोत्साहित बनाएकै छ । नयाँ उद्योगी नजन्मिनुका यसको पनि ठूलो भूमिका छ ।
बैङ्कले परियोजना सुरु गर्दा जुन दरमा कर्जा दिएको हुन्छ । त्यसलाई किन बढाउने ? नयाँ परियोजना सुरु गर्दा पो नयाँ रेटमा ब्याजदर फिक्स हुन्छ त । एउटा उद्योगीले आजको ब्याजदर हेरेर उद्योग लगाएको हुन्छ, तर बैङ्कले एकै वर्षमा व्याजदर ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म बढाएका छन् । यस्तो हुँदा कसरी उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ?
उद्यमशीलता विकास गर्न समिट सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिएको छ । तपाईलाई सरकार कुन ठाउँमा चुक्यो जस्तो लाग्छ ?
जसले सुरु गरे पनि हुन्छ । सरकारले सुरु गर्दा पनि हुन्छ, निजी क्षेत्रले सुरु गर्दा पनि हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको सुरु गर्नु हो । हामीले यसअघि पहिलो पटक पूर्वाधार समिट आयोजान गरेका थियौ । त्यो बेला हामीले रोड कनेक्टिभिटी, रेल कनेक्टिभिटी र वाटर कनेक्टिभिटीको कुरा गरेका थियौ । त्यो सपना सीएनआईले बोकेको थियो । आज त्यो कुरा हाम्रा राजनीतिज्ञ, उच्च कर्मचारी तह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पनि बोल्न थालेका छन् । भनेपछि सुरुवात भयो, यो ठूलो कुरा हो । त्यो बेला उठाएको कुराले देशभित्र भाइब्रेन्ट ल्यायो । हामीले उद्यमशीलता समिट गरेर पनि भाइब्रेन्ट ल्याउन चाहेका हौ ।
फेरी यो समिटमा सरकारको सहभागिता छ । निजी क्षेत्रले ‘आइडिया क्रेट’ ग¥यो । तर, सरकार पनि त सहभागि भएको छ । यो सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहभागिता छ । यसका राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि सहभागिता छ । सात ओटै प्रदेशका ७ वटै प्रदेशका उद्योगमन्त्री सहभागिता छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीको सहभागिता छ । भनेपछि यो देशको सबैभन्दा ठूलो सम्मेलनको हुने छ ।
नीतिगत अप्ठयारका कारण देशभित्र लगानी भित्रिन बढ्न सकेको छैन । लगानीमैत्री नीति खारेज वा नयाँ निर्माणका लागि तपाईहरुको ‘लविङ’ कम भएको हो ?
हामीसँग अहिले पनि ३० देखि ४० वर्ष पूराना नीति नियम विद्यमान छन् । त्यो बेला फरक परिकल्पना गरेर बनाइएका नीति अहिले कति व्यवहारिक छन्, कति लगानी अनुकूल छन्, यो बहसको विषय हो । आज समय बदलिएको छ, अवस्था बदलिएको छ, काल परिस्थिति बदलिएको छ । तर, हाम्रा कानुन अझै बदलिएका छैनन् । पूराना कानुनलाई संशोधन नगरी हुँदैन । त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौं । २०२२ सालमा बनेको कानुन आज पनि कार्यान्वयनमा छन् । भनेपछि कसरी उद्योग लगाउन सकिन्छ ।
नयाँ उद्योग नलाग्नु, उद्योगीले थप क्षमता विस्तार गर्न नसक्नु र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कम हुनु हो । उद्योगसम्बन्धी २६÷२७ ओटा कानुन छन्, ती कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन जरुरी छ । त्यसमा हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौं । बल नपुगेको हुन सक्छ, तर प्रयास जारी छ । नीतिलाई अनुकूल बनाउन योजना आयोग, नीति निर्माणलगायत सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
अहिले पनि वन तथा भूमिमा समस्या छ । एक आपसमा बाझिएका कानुनले समस्या ल्याइरहेको छ । यसलाई कसरी हल गर्नुपर्छ ?
तपाइले उठाएको विषय एकदमै समय सान्दर्भिक छ । यो अहिलेको समस्या पनि हो । अहिले पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा बाझिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा आयकर ऐनले काटेको छ । उद्योगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन हेरेर उद्योगीले उद्योग लगाउने हो । तर, आयकर ऐनले काट्न थाले पछि के हुन्छ ? उद्योगीको समस्या औद्योगिक व्यवसाय ऐनले मात्रै बुझ्छ । त्यही भएर सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख भएका सुविधा दिन कन्जुस्याई गर्नु हुन्न ।
उद्योग मन्त्रालय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ अग्रसर छ भने अर्थ मन्त्रालयको मुख्य ध्यान राजस्व उठाउनेतर्फ गयो । दुई मन्त्रालयबीचको भूमिका फरक–फरक परेकाले समस्या भएको हो ?
मन्त्रालयले आ–आफ्नो परिधिभित्र रहेर काम गर्छन । उनीहरुको भूमिका आ–आफ्नै छ । अर्थ बढी नै हावी भएको छ । अर्थको अहिलेको प्रखुम काम भनेको रावस्व उठाउने हो । बढी भन्दा बढी राजस्व कहाँबाट उठाउन सकिन्छ, त्यही हेरेर बसेको छ ।
तर, हामीले भूमिकाको विषयमा अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीबीचमा छलफल भइसकेको छ । बाझिने गरी काम नगर्ने बताउनुभएको छ । मिलेर कसरी यो विषयलाई सल्टयाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ ।
आर्थिक ऐनमै उद्योगीले पाउने सुविधा राखियो भने यस्तो समस्या हल हुँदैन ?
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले सुविधा दिएन । यदि आर्थिक ऐनले सुविधा दिने हो भने अहिलेको सम्पूर्ण समस्या हल हुन्छ । संसदबाटै पास भएको ऐनमा राखिएको सुविधा किन कार्यान्यनय हुँदैन ? आर्थिक ऐन पनि संसदबाटै पास भएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि संसदबाटै पास भएको हो । तर, किन कार्यान्वयन हुँदैन । बजेट भाषण आउँनुपूर्व आर्थिक अध्यादेश आउँछ । त्यो पनि संसद्ले पास गर्ने हो । तर, यस्ता बाझिएका कुराहरु छिटै हल गर्ने सरकारले आश्वासन दिएको छ । सायद, हुन्छ होला ।
२५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा इआइए गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेको अवस्थामा यो प्रावधान कतिको जायज छ ?
आज जुन गतिमा मूल्य बढेको छ । त्यसलाई हेर्दा यो पुँजी एकदमै कम हो । डलरको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने, आज ११८ रुपैयाँसम्म पुगको अवस्था छ । यो व्यवस्था राख्दा प्रतिडलर ४० देखि ५० रुपैयाँ थियो । डलरको मूल्यलाई हेर्दा २५ करोड रुपैयाँ भनेको केही पनि होइन । आज भन्दा २० वर्ष पहिला ५/१० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुलेको उद्योग हुन्थे । त्यो बेला जायज थियो होला । आज त हाम्रो देशमा ५०० करोडदेखि १०० करोड रुपैयाँसम्मका उद्योग पनि छन् ।
कि सरकारले आइइ र इआइए गर्न लाग्ने समय घटाउनु प¥यो । समयसीमा तोक्ने र त्यो सीमाभित्र सक्नै पर्छ भन्ने नियम बनाउनु प¥यो । होइन भने यो २५ करोडको सीमा बढाउनु पर्छ । उसै पनि उद्योगले सेफ्टीका मेर्जरहरु पूरा गरेका हुन्छन् । आज विश्वका नयाँ नयाँ मेर्जर आइसकेका छन्, त्यो नेपाली उद्योगले पनि ल्याएका छन् । बरु सरकारले प्रदुषण नियन्त्रणमा उद्योगले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यो हेर्ने काम सरकारले गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिलेको युगमा सरकारले पुँजीलाई बेस मान्नु हुँदैन । सरकारले उद्योगको प्रथामिकतालाई आधाार मानेर अघि बढ्नु प¥यो । सरकारले ६०/७० प्रतिशत भ्यालु एड हुने उद्योगलाई बन, जग्गा लागायतको शुल्क न्यून गर्नुपर्छ । यसको अर्थ वातावरण विर्गानु पर्छ भन्ने होइन । विश्वका भएका सेफ्टी मेर्जर राख्नुप¥यो ।
एकातिर सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल अभियान अघि बढाइरहेको छ । तर, अर्को तिर विदेशी तथा स्वदेशी लगानी घट्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्थमा सरकारको अभियान कसरी सम्भव हुन्छ ?
हिजोसम्म नेपालमा हेजिङ फन्डको व्यवस्था थिएन । अब हेजिङ फन्ड व्यवस्था भइसकेको छ । त्यो हेजिङ फन्डले कसरी काम गर्छ । कस्ता किसिमका व्यवस्था राखिएको छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यो कति कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ ? प्रत्येक्ष बैदेशिक लगानी नआउनुको पछाडि यो पनि प्रमुख कारण थियो । विदेशी मुद्रा जोखिमले पनि भूमिका खेलेको थियो । यो व्यवस्थापछि एफडीआई पनि आउँछ र लोन पनि ल्याउन पाइन्छ ।
हाम्रो देशमा सम्भावना धेरै छन्, मात्रै लगानी नभएको हो । अब लगानी भित्रिने बाटो सरकारले खुला गरेको छ । देशभित्र पाँच ओटा क्षेत्रमा सम्भावना छ । ती क्षेत्रमा लगानी पनि आउन सक्छ । स्वदेशी लगाानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्छन् ।
१) जलविद्युत्, २) खानी, ३) पर्यटन, ४) शिक्षा। ५) मेडिकल
पाँच ओटै क्षेत्रमा हाम्रो सय प्रतिशत स्रोत छ । जलविद्युत् क्षेत्र नेपालका लागि एकदमै सम्भावना युक्त ठाउँ हो । जलविद्युत् आयोजना बनाउन हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भनेको केही इक्वीमेन्ट मात्रै हो । त्यो बाहेक सम्पूर्ण नेपालमै छ । खानीमा पनि सोही सम्भावना छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्न कोइला र जिप्सम मात्रै आयात गर्नुपर्छ । बाँकी सबै हाम्रो देशमा छ । ९७ प्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध हुन्छ ।
नेपालमा यति राम्रा डाँडाकाँडा छन्, त्यसको मात्रै मार्केटिङ गर्न सक्यौ भने अरु केही चाहिँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा भएको एउटा मात्रै कमि भनेको पर्यटन पूर्वाधार हो । अरु सबथोक छ । बस्नका लागि राम्रो व्यवस्था छैन, यातायातको सुविधा छैन्, । सतप्रतिशत भ्यालुऐड हुने क्षेत्र हो–पर्यटन ।
कुनै क्षेत्रलाई शिक्षाको हब बनाएर अघि बढन सकिन्छ । शिक्षाको पूर्वाधार बनाउन मात्रै कच्चा पदार्थ एक पटकका लागि ल्याउनुपर्ने हो । त्यसबाहेक अन्य सबै स्रोत हामीसँगै छ । पढाउने शिक्षक बाहिरबाट ल्याउनुपर्ला । राम्रो पढाइ हुन थाल्यो भने, विद्यार्थीको कुनै अभाव हुँदैन ।
कुनै एउटा डाँडालाई मेडिकल हबको रुपमा विकास गर्न सक्छौ । हाम्रो मेडिकल शिक्षा उपलब्ध गराउने हो भने, नेपालमा विभिन्न देशबाट मेडिकल अध्ययनका लागि नेपाल आउन सक्छन् । त्यति मात्रै होइन, हाम्रो देशबाट बाहिरिने रकमलाई मात्रै रोक्न सक्यो भने पनि पुग्छ ।
व्यापार घाटा चुलिए भनेर सरकारले केही विलासी बस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारको यो उपायले सहयोग पु¥याउँछ ?
सरकारबाट क्लीयर भिजन आएको छैन । कुनै किसिमका डिटेल्स आएका छैनन् । तर, एउटा बस्तु कसैलाई विलासिता लागिरहेको छ भने, कसैलाई त्यो अत्यावश्यक पनि हुन्छ । प्रविधिले गर्दा विश्वबजार सानो भएको छ । एउटा एपबाट विश्वमाथि नजर लगाउन सक्नुहुन्छ ।
भनेपछि कस्ता वस्तुलाई विलासिलता भन्ने ? मोवाइललाई विलासिता भन्ने, गाडीलाई विलासिता भन्ने, मोटरसाइकलाई विलासिता भन्ने । कसलाई विलासिता भन्ने ? यो धेरै गाह्रो छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको छ । निर्यात बढन सकेको छैन । तर, अर्थतन्त्रलाई थोरै नियन्त्रण गरेन भने भोलिका दिनमा नराम्रो हुन सक्छ । सस्टेनेवल पोजिसन खराब हुँदै गएको छ । सायद, यही भएर होला अर्थले नयाँ कदम चालेको हो । पहिला नीति आयोस्, कस्तो गर्न खोजेको हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । यदि राज्यले यस्ता वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने बित्तिकै राजस्वमा असर पर्छ । राजस्वमा असर पर्ने बित्तिकै राज्य सञ्चालनमा समेत अप्ठयारो पर्न जान्छ ।
सुजन ओली क्यापिटल नेपालका संवाददाता हुन्
सुजन ओली बाट थप
रोकियो नयाँ उद्योग दर्ता, लगानी भित्र्याउने सरकारको योजनामा तुसारापात
बेच्न मात्रै होइन, बाइक बनाउन पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा
उद्दण्ड वीरगन्ज, सभ्य भैरहवा
योजना पार्न अझै सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि आयोग धाउँदै
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद : दुवैको भविष्य अदालतको हातमा
‘सङ्घीय रुपान्तरणका जटिलता फुकाउँदै पुनर्निर्माणले गति लिएको छ’- पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीसँगको अन्तर्वार्ता
उद्योग वाणिज्य महासंघको राजनीतिले ब्याज आन्दाेलन चर्कियाे
‘होडबाजीमा ऋण लिनेहरु टाट पल्टिन्छन्’- राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको अन्तर्वार्ता
घर-जग्गा कारोबार गर्नेहरुका लागि ‘रीमा’ तालिम
चीनको सान्सीस्थित होटेल पिपल्स ग्रान्डमा नेपाली झन्डा
चितवनका दानी व्यक्ति, जसले अस्पताललाई तीन करोड दान गरे, अब विश्वविद्यालय बनाउने धोको
बंगलादेशमा नेपाली धागो निर्यात गर्ने बाटो खुल्यो